Masheya emasheya eEurope | Ehupfumi Zvemari
Masheya emasheya eEurope
Kana chinangwa chevatengesi chiri kusarudza misika yeEuropean equity, hapana mubvunzo kuti dzimwe nzira dzakakura kwazvo. Kusarudza pakati penyika dzenyika dzinonyanya kukosha mukondinendi yakare, kusanganisira musika weSpanish unomiririrwa neIbex 35. Mukati meichi chirevo, zvichangosara kuona kuti nderipi rinokodzera mukati mezvido zvako zvese. . Kunyangwe ivo vachiwanzove ne shanduko yakafanana chaizvo pakati pavo vese kubva pavanobva munzvimbo imwechete yehupfumi senge iyo inoumba iyo euro zone.
Aya eEuropean stock indices ndeimwe nzira yekudyara pasina kusiya miganhu yekondinendi yekare. Nezvakanakira kuti imwe kana imwe yemhando yekudyara inogona kusarudzwa sezvo panogona kuve nemisiyano padyo nepesenti poindi. Nechinangwa chekutanga che wedzera purofiti margins iyo inogona kupa misika yemari munyika medu. Pasina kana kumbofanirwa kukwidza makomisheni anogadzirwa kubva mumisika yemari iyi. Nemaawa akafanana seayo mumisika yemari yenyika.
Kune rimwe divi, iwe unogona kutora mukana wezano sepakutanga sekusarudza maIndices ane akanakisa ehunyanzvi chimiro pane imwe nguva yegore. Kufanana nekutenga masheya asipo mumisika yekumba. Pamusoro pezvo, ichokwadi kuti makomisheni emisika yemari iyi haanyanyo kuda uye mune chero iri pasi peavo vanobvumidzwa US equities inova ndiyo inonyanya kuda nguva dzino chaidzo. Kusvika pakuti inogona kusimbiswa seimwe sarudzo mukudyara izvozvi.
1 Furanzi: iyo CAC 40
2 Iyo Dax yeGerman
4 FTSE MIB muItari
Furanzi: iyo CAC 40
CAC 40 inotora zita rayo kubva panguva yayo yekutanga (Cotation Assistée en Kuenderera mberi), iyo inosanganisa iwo makumi mana akakosha kukosha kubva pakati pe Makambani zana akakurisa akatengesa muParis Stock Exchange. Chikamu chakanaka chezvinhu zvacho chinoumbwa nemakambani eFrance. Kunyangwe kana iyi index index ichizivikanwa nechimwe chinhu, imhaka yekuti mazhinji emakambani aya ane zvido kunze kweFrance. Chinhu chinofamba kubva munzira dzekambani dzinowanikwa muIbex 35.
Kune rimwe divi, zvikamu zvinoitika kubva Muvhuro kusvika Chishanu, sezvazviri kune mamwe maIndices eEurope. Nemisangano yekutengesa inopera mune pfupi-yakagara-yega kurongedza kwekutengesa. Nedzimwe dzeakakosha kukosha mukati meiyi nzvimbo yenzvimbo, kusanganisira zvikamu zvacho aeronautical, zvemari kana terevhizheni. Nemakomisheni mukutenga nekutengesa masheya akafanana chaizvo needu. Seimwe yeimwe nzira kune yakasarudzika indekisi yeSpanish equities.
Iyo Dax yeGerman
Iyo DAX 30 kana Xetra ndiyo yebhuruu chip equity index yeiyo Makambani makuru makumi matatu muGerman uye yakanyorwa pamisika yeFrankfurt equity. Izvo zvikamu zvinogadzirwa pasi pemutengo wekuvhara okisheni sisitimu uye nemaawa akafanana seSpanish stock stock. Kunyangwe zvichipesana, ndeimwe yemakisi ane pesvedzero huru pane mamwe misika yemari yeEurope, uye kunyanya iwo eSpanish. Ose maviri mune imwe pfungwa kana imwe, nekuti simba reiyi indekisi index rakakura kupfuura iro revamwe. Sechinongedzo sosi kune vazhinji vevashoma nevapakati varimimari vanozvitora mukufunga, zvese kuvhura nekuvhara zvinzvimbo pamusika wemasheya.
Ndiyo bhenji yechiratidzo cheLondon Stock Exchange uye ndeimwe yezvakanyanya kukosha pasirese. Kune rimwe divi, iyo inoumbwa nemakambani zana e Mari hombe yemusika yeUK. Zvemari hombe uye izvo zvinomira pachena nekuti muzviitiko zvakawanda vanozivikanwa nevashambadzi vadiki nepakati. Iyo indekisi yemasheya inozivikanwa se «footsie » iyo, mushure mezvose, iri chidimbu cheFederal Times Stock Exchange 100.
Nokuda kwe Brexit, iyi mareferenzi sosi yeEuropean equities yakati sununguka uye mupfungwa iyi inogona kuve imwe nzira yekutarisana nemari kubva mumwedzi mishoma inotevera. Hazvishamisi kuti, haifanirwe kudzokorora maindekisi makuru ekare kondinendi uye nekudaro inogona kumiririra mikana mitsva yebhizinesi kune vanoita mari vane mbiri ine hukasha. Kunyangwe iyo isingatombo wedzera kana kushoma purofiti, asi zvinopesana, zvinoenderana nemamiriro azvino ezvinhu akafanana.
FTSE MIB muItari
Haisi indekisi diki, sekufunga kwevamwe varimi, asi inogona kuve imwe nzira yekudyara uye yakafanana neyedu. Ndiyo huru stock stock muItari iyo iri muMilan. Iko kwakarongedzwa zvikamu makumi mana nemubhadharo wepamusoro wepamusika wemusika Makambani mazana matatu mazana matatu anotengeswa pachena. Pane ese maindices, iyi ndiyo imwe yeanonyanya kugadzikana mumutengo wemasheya ayo. Ndokureva, iwe unogona kuwana mari yakawanda mukushanda, asi nekuda kwechikonzero chimwe chete iwe unogona kusiya maeuro mazhinji mumugwagwa nekuda kweichi chakasarudzika hunhu mumari yeItaly.
Uye kupedzisa, isu hatigone kukanganwa bhenji yezvese zviyero zveEurope. Mune ino kesi, yakakosha index index iyo inoumbwa nemakambani makumi mashanu ane hupamhi hwepamusoro pamisika yemasheya yekondinendi yekare. Kana isuwo hatigone kuti mune ino sosi sosi zvimwe zve zvitema machipisi eSpanish equities. Semuenzaniso, Banco Santander, BBVA, Telefónica kana Iberdrola pakati pemamwe emakambani akanyorwa zvakanyanya pamusika. Izvo, sezvavanotaura, kirimu yechirimwa yemitengo yenharaunda ino. Nemaitiro akafanana chaizvo nemamwe misika yemasheya. Nemisiyano mishoma kwazvo muchimiro chayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Masheya emasheya eEurope
Patriotic zvisungo: imwe nzira yekudyara